फोनमा ‘हेल्लो’ भन्ने चलन कसरी चल्यो ? - Nepal's No.1 News portal
टेलिफोनका आविष्कारक अलेक्जेन्डर ग्राहम बेल हुन् ।उनले १० मार्च १८७६ मा टेलिफोनको आविष्कार गरी पेटेन्ट लिए । फोनको आविष्कार गरेसँगै उनले सबैभन्दा पहिले आफ्ना मित्र वाट्सनलाई सन्देश प्रेषित गर्दै भने : श्री वाट्सन यहाँ आऊ । मलाई तिम्रो खाँचो पर्यो । ग्राहम बेलले फोनमा हेल्लो होइन Ahoy शव्द बोलेका थिए ।
टेलिफोनको प्रयोग आम रुपमा हुन थालेसँगै मानिसहरुले फोनमा कुरा गर्दा सुरुमा बोल्ने शव्द हुन्थ्यो : Are you There ? अर्थात् मलाई सुनेका छौ ? तर पछि वैज्ञानिक थोमस अल्बा एडिसनले Ahoy शव्दलाई अप्रभंस गरी सन् १८७७ मा Hello भन्ने प्रस्ताव गरे ।
नेपालमै पहिलो पटक ‘साइबर सेक्युरिटी एण्ड डिजिटल फरेन्सिक’ पढाइ हुने